Super Monopoly Ego | Egwuregwu WMS Online - jluis37.com
N’ụzọ na-emegide onwe ya, Monopoly, ihe kacha mma, ihe zuru ụwa ọnụ nke egwuregwu bọọlụ, ka emebere ka ọ bụrụ ihe ọchị banyere ọnọdụ akụ na ụba nke akụ na ụba America, mgbe ndị slumlords na ndị na-ekwuchitere ebubo na-akwụ ụgwọ mgbazinye ego na akụrụngwa zụrụ website Id iji nwayọ nke ịkwụ ụgwọ: t mbụ, nke kachasị ihe ịga nke ọma slumlord bụ onye meriri egwuregwu ahụ, mana ọ dabara nke ọma na ọ gbanweren’ime obi ike onye isi ala romp nke amara ma hụ taa. Tupu egwuregwu ahụ abanye na kọmputa, a na-ebipụta self love Monopoly kwa ụbọchịn’ụwa niile karịa self love mba ọ bụla!
Daha Proceed, Na-anakọta Mgwakota agwa gị
The oghere egwuregwu si Williams Interactive Software na-eji ihe nnọchianya si mbụ osisi egwuregwu (onye ọ bụla chọrọ ịbụ ọduọ ụgbọ ala!) Dị ka ala uru nrịbama na ya 5 esi anwụde. Egwuregwu ahụ gosipụtara ahịrị atọ ma nwee akara nkwụnye ụgwọ 25, yana eserese na-acha uhie uhie na-agbagharị megide mbara igwe anwụ nke Eiffel Tower na Big Ben: enwere ụda jazz dị egwu na ntụgharị, yana ụda obodo, nke na-enye egwuregwu ahụ dị egwu ma dịkwa egwu.
Mgbe akara akara nke akpụkpọ ụkwụ, ụgbọ agha ụgbọ ala na okpu elu, enwere ite self love, tagzi, na bọs, nke ndị ụjọ na-ebute mgbe ahụ, na-eji ọnụ real time buck, onye na-agba agba, na Mr Monopolyn’onwe ya. Ọtụtụ ụdị dị iche iche na-abata mgbe ị na-ebute akara anụ ọhịa: enwere anụ ọhịa bụ isi, nke na-anọchi akara akara niile, yana Monopoly Money Wild, nke nwere ike dochie akara niile ma e wezụga anụ ọhịa n’onwe ya. E nwekwara ihe nnọchi anya Bonus, nke na-akpata ntụgharị efu 8, 10 ma ọ bụ 15, dabere ma ị rutere 3, 4 ma ọ bụ 5 n’ime ndị a na otu ntụgharị nke esi esi.
A Kpọrọ A Twist
Ego zuru oke nwere self dị iche iche: nke mbụ bụ ezigbo ol’Free Parking, nke na-enye gị akara akara isen’okpuru akara ngosi. Ickinghọrọ onye nwere ike ikpughere anụ ọhịama self ego, ma ọ bụ akara ọ bụla dị t 1, na-ebute njikọta ọhụrụ.
Mgbe akara self nke Monopoly Money pụtara na mkpanaka mkpanaka NZ reel 5, ọ ga – eme ka anụ ọhịa na – agbasawanye: mmeri a na – emeri ga – akwụ ụgwọ, na ị ga – akwụ ụgwọ na – akwụ ụgwọn’etiti 10 na 100 ugboro mbụ nzọ maka akara ọ bụla, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enweghị njikọ ndị ọzọ na-guzobere.
Enwere ike inye belọ Ego ma ọ bụ Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ na-enweghị self explanatory, na-arụ ọrụ dị ka ọnụọgụ: ohere ịnweta otun’ime ndị a na-abawanye ka uru nke self gị na-emen’otu Encourages ahụ.
N’ikpeazụ, enwere self respecting hanger, nke Mr Monopoly ga – atụgharị gị maka gị: nke a nwere ike ị nweta gị ọtụtụ nke ruru 100x, ma ọ bụ ntụgharị nke ugboro 200. Ọ bụrụ na wiil ahụ ada na Chance ma ọ bụ Neighborhood Igbe, mgbe ịtụtụrụ a kaadị ga-enye gị a pokies multiplier, ruo 50x.
Ibi Ndụ Dị Elu
Super Monopoly Money bụ otun’ime nsogbu ndị na-achọsi iken’ebe ahụ, yana ịbụ ihe na-atọ ụtọ, yana ezigbo mmeri. Na mgbakwunye,n’ụzọ a, ị ga-anọn’akụkụ dị mma nke ndị enyi d e ezinụlọ mgbe ị na-ehicha!